အသကျ ၅၀ နှဈပွညျ့ မှေးနမှေ့ာ ဂယျရီနဗီးလျရဲ့ မေးခှနျး ၅၀ ကို ဖွကွေားခဲ့တဲ့ ရှိုငျကိနျး – Play Maker Sports Journal
ရှိုငျကိနျးဟာသူ့ရဲ့အသကျ၅၀နှဈပွညျ့နှဈမှေးနမှေ့ာမနျယူကစားဖျောဟောငျးဂယျရီနဗီးလျရဲ့Podcast အစီအစဉျမှာပါဝငျပွီးမေးခှနျးအခု ၅၀ကို ဖွကွေားမှုပွုလုပျခဲ့ပါတယျ။
မနျယူဂန်ထဝငျအသငျးခေါငျးဆောငျဟာသူ့ခှေးနဲ့အတူလမျးလြှောကျနရေငျး ဂယျရီနဗီးလျရဲ့The Overlap အစီအစဉျမှာပါဝငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဂယျရီနဗီးလျ – ခငျဗြားတှဲကစားခဲ့တဲ့ဂိုးသမားတှထေဲမှာ ဘယျဂိုးသမားကအကောငျးဆုံးလဲ?
ရှိုငျကိနျး – ပီတာရှမိုကျကယျ။ဒါပမေယျ့သူ့ကို Overraated လို့ထငျတယျ။သူ့ကိုလူတှထေငျသလိုမြိုးအရမျးကောငျးတယျလို့မထငျဘူး။ဒါပမေယျ့သူကဂိုးသမားကောငျးတဈဦးပါ။
ဂယျရီနဗီးလျ – အခကျခဲဆုံးပွိုငျဘကျကကော?
ရှိုငျကိနျး – ကြုပျငယျစဉျတုနျးကဂါဇာ(ပေါလျဂတျစကှိုငျနီ)နဲ့ရငျဆိုငျခဲ့ဖူးတယျ။သူအရမျးကောငျးတယျ။ဒါပမေယျ့အားလုံးခွုံရရငျတော့ဇီဒနျးပါ။
ဂယျရီနဗီးလျ – အကောငျးဆုံးခွစှေမျးပွခဲ့တဲ့ပှဲကကော?
ရှိုငျကိနျး – အိုငျယာလနျနဲ့အတူကစားတုနျးကပေါ့။ဟျောလနျ၊ပျေါတူဂီတို့နဲ့ရငျဆိုငျခဲ့တဲ့ပှဲနှဈပှဲကတကယျ့ပှဲကောငျးတှပေါ။ကမ်ဘာ့ဖလားမှာအီတလီနဲ့ရငျဆိုငျတဲ့ပှဲဖွဈနိုငျပါတယျ။
ဂယျရီနဗီးလျ – အဆိုးရှားဆုံးပှဲကကော?
ရှိုငျကိနျး – အိမျကှငျးမှာရီးရဲလျမကျဒရဈကိုရငျဆိုငျခဲ့ရတယျ။အဲဒီပှဲမတိုငျခငျရကျအနညျးငယျမှာဘဲယောဂလကေ့ငျြ့ခနျးလုပျဖို့ကွိုးစားခဲ့တာပါ။တကယျဆိုမလုပျခဲ့သငျ့ဘူး။အဲဒီပှဲမှာဘာမှထိထိရောကျရောကျမလုပျခဲ့ဘူး။နောကျတော့လူစားလဲခံရတယျ။ငါ့ရဲ့ထိပျတနျးအဆငျ့မှာဘောလုံးကစားမှုပွီးသှားပွီလို့တောငျတှေးခဲ့မိတာသတိရမိသေးတယျ။
ဂယျရီနဗီးလျ – ပရိသတျအားပေးမှုအကောငျးဆုံးပှဲကကော?
ရှိုငျကိနျး – အာဆငျနယျနဲ့ရငျဆိုငျရတဲ့ပှဲတှကေတော့ပရိသတျအားပေးမှုအကောငျးဆုံးပှဲတှပေေါ့ဗြာ။
ဂယျရီနဗီးလျ – အကောငျးဆုံးအိမျရှငျပရိသတျကကော?
ရှိုငျကိနျး – လိဒျကိုအဝေးကှငျးသို့သှားကစားရတာအကောငျးဆုံးပဲ။တူရကီသို့သှားကစားရတာလညျးကောငျးပါတယျ။
ဂယျရီနဗီးလျ – အခုအခြိနျအထိတှေးနတေဲ့အကွောငျးက?
ရှိုငျကိနျး – ဒူးအရှတျဒဏျရာနဲ့ပေါ့။နညျးနညျးတော့ကွောငျတျောတျောနိုငျတယျ။ဒါပမေယျ့ကြှနျတျောတို့ထိုကျတနျတယျလို့မထငျဘူး။
ဂယျရီနဗီးလျ – အကွိုကျဆုံးပှဲက?
ရှိုငျကိနျး – စပါးဈကိုနိုငျပွီးလိဂျရတဲ့ပှဲပေါ့ဗြာ။အဲဒီပှဲမှာအရမျးပြျောခဲ့ရတယျ?
ဂယျရီနဗီးလျ – ၉၄ အသငျးလား၊ ၉၉ အသငျးလား?
ရှိုငျကိနျး – ၉၄ အသငျးကိုခဈြတယျ။ကှဲပွားတဲ့စရိုကျတှတှေရှေိတယျ။ယူနိုကျတကျသို့ရောကျလာခါစပေါ့။အဝတျအစားခနျးကိုခဈြတယျ။
ဂယျရီနဗီးလျ – အကွီးမားဆုံးနောငျတက?
ရှိုငျကိနျး – အဈဝှဈချြသို့သှားခဲ့တာ။
ဂယျရီနဗီးလျ – သမိုငျးမှာအကွီးကယျြဆုံးကစားသမားက?
ရှိုငျကိနျး – ဒီယဂေိုမာရာဒိုနာ။သူကအရမျးကောငျးတယျ။
ဂယျရီနဗီးလျ – တှဲကစားခဲ့ဖူးတဲ့သူတှထေဲမှာဘယျသူအကောငျးဆုံးလဲ?
ရှိုငျကိနျး – အလယျတနျးမှာအတူတူတှဲကစားရလို့ရှေးလိုကျတာပါ။ဘတျတီ(နဈကီဘတျ) သို့မဟုတျ စကိုးစီ(ပေါလျစခိုး)။ပေါလျစခိုးကိုဘဲရှေးမယျ။သူကဂိုးသှငျးနိုငျတယျ။
ဂယျရီနဗီးလျ – ခငျဗြားနဲ့ ပကျထရဈဗီအဲရာမှာ ဘယျသူကပိုကောငျးလဲ?
ဂယျရီနဗီးလျ – ဖီးလျလား၊ဂယျရီ(နဗီးလျ)လား?
ရှိုငျကိနျး – မငျးတို့ညီအဈကိုနှဈယောကျလုံးကကောငျးကွပါတယျ။ဒါပမေယျ့ဖီးလျကတြော့မတူဘူး။သူကအသငျးလိုကျစိတျဓာတျရှိတဲ့သူ။သူကကှဲပွားတဲ့အလုပျကိုလုပျတဲ့သူ။မငျးကအဲဒီလိုမြိုးမလုပျနိုငျဘူး။
ဂယျရီနဗီးလျ – ရျောနယျဒိုလား၊ မကျဆီလား?
ရှိုငျကိနျး – နတေို့ငျးရျောနယျဒိုပါ။
အသက် ၅၀ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့မှာ ဂယ်ရီနဗီးလ်ရဲ့ မေးခွန်း ၅၀ ကို ဖြေကြားခဲ့တဲ့ ရွိုင်ကိန်း
ရွိုင်ကိန်းဟာသူ့ရဲ့အသက်၅၀နှစ်ပြည့်နှစ်မွေးနေ့မှာမန်ယူကစားဖော်ဟောင်းဂယ်ရီနဗီးလ်ရဲ့Podcast အစီအစဉ်မှာပါဝင်ပြီးမေးခွန်းအခု ၅၀ကို ဖြေကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
မန်ယူဂန္ထဝင်အသင်းခေါင်းဆောင်ဟာသူ့ခွေးနဲ့အတူလမ်းလျှောက်နေရင်း ဂယ်ရီနဗီးလ်ရဲ့The Overlap အစီအစဉ်မှာပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဂယ်ရီနဗီးလ် – ခင်ဗျားတွဲကစားခဲ့တဲ့ဂိုးသမားတွေထဲမှာ ဘယ်ဂိုးသမားကအကောင်းဆုံးလဲ?
ရွိုင်ကိန်း – ပီတာရှမိုက်ကယ်။ဒါပေမယ့်သူ့ကို Overraated လို့ထင်တယ်။သူ့ကိုလူတွေထင်သလိုမျိုးအရမ်းကောင်းတယ်လို့မထင်ဘူး။ဒါပေမယ့်သူကဂိုးသမားကောင်းတစ်ဦးပါ။
ဂယ်ရီနဗီးလ် – အခက်ခဲဆုံးပြိုင်ဘက်ကကော?
ရွိုင်ကိန်း – ကျုပ်ငယ်စဉ်တုန်းကဂါဇာ(ပေါလ်ဂတ်စကွိုင်နီ)နဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ဖူးတယ်။သူအရမ်းကောင်းတယ်။ဒါပေမယ့်အားလုံးခြုံရရင်တော့ဇီဒန်းပါ။
ဂယ်ရီနဗီးလ် – အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့ပွဲကကော?
ရွိုင်ကိန်း – အိုင်ယာလန်နဲ့အတူကစားတုန်းကပေါ့။ဟော်လန်၊ပေါ်တူဂီတို့နဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲနှစ်ပွဲကတကယ့်ပွဲကောင်းတွေပါ။ကမ္ဘာ့ဖလားမှာအီတလီနဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့ပွဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဂယ်ရီနဗီးလ် – အဆိုးရွားဆုံးပွဲကကော?
ရွိုင်ကိန်း – အိမ်ကွင်းမှာရီးရဲလ်မက်ဒရစ်ကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်။အဲဒီပွဲမတိုင်ခင်ရက်အနည်းငယ်မှာဘဲယောဂလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာပါ။တကယ်ဆိုမလုပ်ခဲ့သင့်ဘူး။အဲဒီပွဲမှာဘာမှထိထိရောက်ရောက်မလုပ်ခဲ့ဘူး။နောက်တော့လူစားလဲခံရတယ်။ငါ့ရဲ့ထိပ်တန်းအဆင့်မှာဘောလုံးကစားမှုပြီးသွားပြီလို့တောင်တွေးခဲ့မိတာသတိရမိသေးတယ်။
ဂယ်ရီနဗီးလ် – ပရိသတ်အားပေးမှုအကောင်းဆုံးပွဲကကော?
ရွိုင်ကိန်း – အာဆင်နယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ပွဲတွေကတော့ပရိသတ်အားပေးမှုအကောင်းဆုံးပွဲတွေပေါ့ဗျာ။
ဂယ်ရီနဗီးလ် – အကောင်းဆုံးအိမ်ရှင်ပရိသတ်ကကော?
ရွိုင်ကိန်း – လိဒ်ကိုအဝေးကွင်းသို့သွားကစားရတာအကောင်းဆုံးပဲ။တူရကီသို့သွားကစားရတာလည်းကောင်းပါတယ်။
ဂယ်ရီနဗီးလ် – အခုအချိန်အထိတွေးနေတဲ့အကြောင်းက?
ရွိုင်ကိန်း – ဒူးအရွတ်ဒဏ်ရာနဲ့ပေါ့။နည်းနည်းတော့ကြောင်တော်တော်နိုင်တယ်။ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ထိုက်တန်တယ်လို့မထင်ဘူး။
ဂယ်ရီနဗီးလ် – အကြိုက်ဆုံးပွဲက?
ရွိုင်ကိန်း – စပါးစ်ကိုနိုင်ပြီးလိဂ်ရတဲ့ပွဲပေါ့ဗျာ။အဲဒီပွဲမှာအရမ်းပျော်ခဲ့ရတယ်?
ဂယ်ရီနဗီးလ် – ၉၄ အသင်းလား၊ ၉၉ အသင်းလား?
ရွိုင်ကိန်း – ၉၄ အသင်းကိုချစ်တယ်။ကွဲပြားတဲ့စရိုက်တွေတွေရှိတယ်။ယူနိုက်တက်သို့ရောက်လာခါစပေါ့။အဝတ်အစားခန်းကိုချစ်တယ်။
ဂယ်ရီနဗီးလ် – အကြီးမားဆုံးနောင်တက?
ရွိုင်ကိန်း – အစ်ဝှစ်ခ်ျသို့သွားခဲ့တာ။
ဂယ်ရီနဗီးလ် – သမိုင်းမှာအကြီးကျယ်ဆုံးကစားသမားက?
ရွိုင်ကိန်း – ဒီယေဂိုမာရာဒိုနာ။သူကအရမ်းကောင်းတယ်။
ဂယ်ရီနဗီးလ် – တွဲကစားခဲ့ဖူးတဲ့သူတွေထဲမှာဘယ်သူအကောင်းဆုံးလဲ?
ရွိုင်ကိန်း – အလယ်တန်းမှာအတူတူတွဲကစားရလို့ရွေးလိုက်တာပါ။ဘတ်တီ(နစ်ကီဘတ်) သို့မဟုတ် စကိုးစီ(ပေါလ်စခိုး)။ပေါလ်စခိုးကိုဘဲရွေးမယ်။သူကဂိုးသွင်းနိုင်တယ်။
ဂယ်ရီနဗီးလ် – ခင်ဗျားနဲ့ ပက်ထရစ်ဗီအဲရာမှာ ဘယ်သူကပိုကောင်းလဲ?
ဂယ်ရီနဗီးလ် – ဖီးလ်လား၊ဂယ်ရီ(နဗီးလ်)လား?
ရွိုင်ကိန်း – မင်းတို့ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်လုံးကကောင်းကြပါတယ်။ဒါပေမယ့်ဖီးလ်ကျတော့မတူဘူး။သူကအသင်းလိုက်စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့သူ။သူကကွဲပြားတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့သူ။မင်းကအဲဒီလိုမျိုးမလုပ်နိုင်ဘူး။
ဂယ်ရီနဗီးလ် – ရော်နယ်ဒိုလား၊ မက်ဆီလား?
ရွိုင်ကိန်း – နေ့တိုင်းရော်နယ်ဒိုပါ။